"Kufamba" kune zvakasiyana zvinoreva | Sansan
Kune wese munhu, "kufamba" kune rimwe dudziro. Kune vana vasina hanya, kufamba vanokwanisa kudya chinonaka chakadyiwa naamai vakagara nerudo, uye vanogona kutamba vachifara neshamwari, ndizvo zvinonyanya kunakidza. Kwavari, zvinoreva kufamba kungava "kutamba" uye "kudya"! Kune vechidiki vari kudanana kekutanga, kufamba kunogona kudhonzwa pasi nemaunifomu, kupfeka zvakapfeka zvipfeko uye kugara pane imwecheteyo bhazi rekuenda nevanhu vaunoda. Kwavari panguva iyoyo, zvinoreva kufamba "kupfeka" uye "rudo"; Kune vechidiki vachangopinda munharaunda uye vazere nemweya wekurwa, kufamba kunowanzoita chinhu chinonakidza. Mwoyo yavo yakazara neshungu, uye ivo havamiriri kuti vazive izvo zvinoshamisa zvinhu zviri mberi. Chii chimwe chakakodzera kwavari kuravira nekudzidza. Panguva ino, zvinoreva zvekufamba zvakaparadzaniswa kubva "kutamba" uye "rudo nerudo"
, Asi ine zvakadzama zvinoreva. Kune avo vakura vane ruzivo rwakakura muhupenyu, "kufamba" kwakagara kurasikirwa nechikonzero. Kusiyana nevana vanofamba kuenda kunonakidzwa, havadi kuti vanhu vadiki vatevedze vasina zvavakaita. Ivo vanongoda kuwona uyu wakanaka. Munyika, ini ndinoda kushandisa nguva yakawanda nemhuri yangu uye kusiya zvakanaka ndangariro muhupenyu hupfupi uhwu.
Paunofamba, uchaona maruva nezvirimwa zvisingaenzaniswi, shiri dzisingawanzo kunzwa nezve shiri zviitiko zvausati wamboona ... Iwe uchaona kuti kufamba kunonakidza kwazvo. Iwe unogona kunzwa kuti hupenyu hausi nyore parwendo, ziva maitiro ekukoshesa kukura kwezvirimwa mumarara, goko rakatyoka reshiri, shanduko yecicada ... Zviitiko zvakasiyana siyana zvinoshamisa, zvimwe zvinhu hazvigone kudzidziswa kubva mubhuku. , iwe unoda Tsvaga muchokwadi. Kubata nguva yakanaka iyi, shandisa maziso ako kureketa, kuwana. Kufamba rudzi rwekuzorora kwemanzwiro. Ukatarisa mudenga rebhuruu nehuswa hwakakura, iwe uchanzwika kurerukirwa, uye chimiro chako chisingazive zviri nani. Nyika yakakura, uye uchaifarira yega. Rega kumhanya kwako kubhururuke, uye rega mhepo nyowani ikukomberedze. Iwe unogona kurara zvine rugare uye zvinotapira muchiroto chine rugare. Mukurota kunoshamisa: kunhuhwirira kweuswa kunoita senge uine hwema hwekutapira.
Iko kukosha kwekufamba ndekwekuti iwe unogona kuwana chaicho revo yehupenyu, iwe unogona kuwedzera ruzivo rwako, iwe unogona kuwana zvinhu zvakawanda zvinonakidza, unogona kuzviita wakanganwa uye kuzorodzwa.